1. Kedu ihe bụ Epithalon Acetate?
2. Usoro Epithalon Acetate nke edinam
3. Ngwa nke Epithalon Acetate
4. Akara Epithalon Acetate iji mee ihe
5. Uru Epithalon Acetate
6. Epithalon Acetate n'akụkụ-mmetụta
7. Ọnọdụ Epithalon Acetate nchekwa
8. Ebee ịzụta ọgwụ Epethalon acetate?
Ị nụtụla banyere Epithalon acetate? Ị na-achọgharị na ya ma chọọ ịma ihe niile banyere ya? Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ, isiokwu a ga-enyere gị aka ịme ka ị mara banyere Epithalin Acetate. Isiokwu a ga-enwe ihe ọmụma zuru oke banyere ọgwụ a. Akụkụ dị iche iche nke isiokwu a ga - abụ:
Epithalon acetate (CAS: 307297-39-8) bụ ụdị peptide na a makwaara ya dị ka onye ọgwụ ọjọọ. Aha ndị ọzọ e ji ọgwụ a mara bụ Epithalon, Epithalone, Ala-Glu-Asp-Gly, UNII-O65P17785G na ọtụtụ ndị ọzọ. A maara na Epithalon Acetate, nke ụlọ ọrụ St. Petersburg Institute of Bioregulation na Gerontology mepụtara. Nke a bụ ọgwụ na-arụ ọrụ nke obere gland nke a na-ahụ ụbụrụ anyị nke a maara dị ka ajị anụ. Mgbe nyochachara nke ọma, achọtara na ọgwụ a na-eme ka ogologo telomere dị n'ọbara nke ndị agadi 60-80years. N'otu nnyocha ahụ, a chọpụtara na n'ime ndị ahụ e nyere ọgwụ ọjọọ a, 90% nke mmadụ gosipụtara utịp dị mma.
Site n'ịgbatị ogologo telomeres n'ime mkpụrụ ndụ ọbara nke ndị otu agadi, ọ na-enyere aka na-ahụ ahụ ka ọ nọgide na-adị ike ma dị mma.
Ruo ugbu a, anyị amarala na ọgwụ a nwere ike ịzọpụta mmadụ ma nwee ike ịrụ ọrụ dịka ọgwụ ọjọọ siri ike. N'okwu na-esonụ, anyị ga-atụle usoro nke ọgwụ Epithalon Acetate.
2. Epithalon Usoro nke acetate nke ihe
Site n'enyemaka nke isi a, anyị ga-amata banyere usoro ma ọ bụ ọrụ nke ọgwụ Epithalon acetate n'ime ihe. Epithalon acetate dị ka ọcha ntụ ntụ, a ga-ejikọta ntụ ntụ a na mmiri, ma n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na - amasị ka ejikọta ya na 1% ngwọta nke acetic acid. Ọgwụ a dị kpamkpam na ọnụ ụlọ okpomọkụ. Ihe ndị sitere na ọgwụ Epethalon acetate bụ Epitalon ((S) -4- (S) -2-aminopropanamido) -5 - (((S) -3-carboxy-1 - ((carboxymethyl) amino) -1-oxopropan-2 -yl) amino) -5-oxopentanoicacid). Usoro nke usoro ọgwụ a bụ na ọ na-abanye n'ime ahụ onye ọrịa nwere ọrịa ụfọdụ ma ọ bụ otutu, mgbe ọ na-abanye n'ime ahụ nke onye ahụ, ọ na-awakpo akụkụ ma ọ bụ anụ ahụ metụtara. Ọ bụrụ na ọ na-egbu mkpụrụ ndụ ndị na-agbasa ọrịa ahụ, na-eme ya na-egbu ọrịa ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
N'ebe a, anyị ga-ama banyere ngwa Epithalon Acetate.
Egbochi ịka nkáIhe mbụ eji ọgwụ a eme bụ na ọ na-enyere aka na usoro ịka nká. A na-ejikarị ọgwụ a eme ihe gburugburu ụwa n'ihi nke a ka ukwuu. Egwu Epithalonacetate kacha mma maka ebumnuche ndị dị otú ahụ, ọtụtụ nyocha ndị e mere n'ụwa dum emeela, ihe ọ bụla nke ọmụmụ ọ bụla dị mma, ọ dịghị okwu ọjọọ dị otú a, nke bịara na nchọpụta ahụ.
Antioxidant- ọgwụ Epethalon Acetate na-arụkwa ọrụ dị ka antioxidant. Site n'enyemaka nke ndị na-ahụ maka ọgwụ ndị dị na ọgwụ a, ọtụtụ ndị enwetawo nnukwu uru. Site n'enyemaka nke ndị antioxidants ndị a, mmebi nke a na-eme na mkpụrụ ndụ ahụ anyị na-arụ kwa ụbọchị na-eme ngwa ngwa. Nke a na-ebelata nbibi nke mkpụrụ ndụ nke ahụ anyị na-enyere aka n'ịbawanye ahụ ike anyị dum. Ọtụtụ uru ndị ọzọ bụ ọgwụ ndị a Epithalon Acetate, bụ ndị na-enyere ọtụtụ ndị aka n'ebe ahụ kwa ụbọchị.
Telomere-Otu ozo nke ogwu a bu na o na enyere aka n'inwekwu ogo nke telomere na obara. A na-enye ọgwụ maka nzube a naanị ndị nọ n'afọ 65 ruo 80 afọ.
Researchnzube- Ngwadogwu ikpeazụ nke ọgwụ a bụ na a ka na-eji ya eme ihe maka nyocha maka ọtụtụ ọrịa dịgasị iche iche na anụmanụ dị iche iche. N'ọtụtụ n'ime ihe ndị a, anyị na-arụpụta ihe dị mma, ọ gbakewokwa ọrịa ndị dị ka mkpụrụ ndụ kansa kansa na ọtụtụ ndị ọzọ, nke ọtụtụ n'ime ọgwụ ndị ahụ na-enweghị ike ime.
4. Epithalon Uru acetate
Enwere ọtụtụ uru site na ọgwụ Epethalon Acetate karịa usoro ịka nká naanị, Anyị ga-atụle uru ndị ọzọ dị na ọgwụ a bụ ndị ndị mmadụ na-amaghị na -
♦ Ịbawanye ndụ
Tupu iji ọgwụ ndị a eme ihe na ụmụ mmadụ, a na-eme nnyocha ahụ n'ọtụtụ anụmanụ nke na-enweghị ụmụ anụmanụ e merụrụ ahụ; ya mere nchoputa nke nchoputa ndia biara dika mmalite nke 11 gaa na 17percent nke umu anumanu ahu na-aba. Maka umu anu di iche iche, ihe di ndu di iche.
Mgbe nlezianya nyochaa ụmụ anụmanụ ndị a, mgbe e mechara ọgwụ a, a ga-eji ya mee ihe maka ụmụ mmadụ nke ọgwụ a gosipụtara ezi ihe. Dịka ị ga-amararịrị na ugbu a, ndị mmadụ bi n'ogologo ihe dị ka 40 ruo 50 ọtụtụ afọ, ya mere na iji ọgwụ a eme ihe, anyị nwere ike ime ka ndụ a dịkwuo ruo 16 percent. Nke a ga - eme ka ndụ gị gaa 60-70 afọ.
♦ Mụbaa ọrụ mmezigharị
Mgbe mmadụ na-ere ya ere na enzymes ndị dị n'ime ahụ na-amalite na-ebelata. Ya mere, n'ọnọdụ ahụ, ọgwụ epethalon acetate nwere ike inyere aka n'ịbawanye ọrụ mmezigharị na ahụ anyị.
Ihe omume mmezigharị a bụ ọrụ maka mkpokọta omume na-eme n'ime ahụ anyị site n'enyemaka nke ọrụ niile nke ahụ anyị na-eme. Mbelata nke ọrụ mmezigharị bụ ihe siri ike n'ihi na ndị mmadụ enweghị ike ịchọpụta nsogbu ahụ mgbe ọtụtụ ụdị nchọpụta enzyme nchọpụta mara.
♦ Melatonin secretion na circadian rhythms
Ka m buru ụzọ kọọrọ gị ihe melatonin secretion na circadian rhythms bụ .Melatonin na-emepụta site na pine pine, nke dị na ụbụrụ anyị, nke a na-adịghị mkpa dị mkpa, ma ọ dị oke mkpa n'ihi na nke a secretion ọtụtụ psychological utịp na omume ụmụ mmadụ na-emetụta. Ọ bụ ezie na ụbụrụ circadian bụ usoro dị n'ime ya, nke a bụkwa ihe okike, enyemaka a na-emehie usoro ndụ ụra nke mmadụ nile.
N'okwu a, ọgwụ eethalon acetate na-enyere aka na usoro dịgasị iche dị ka enweghi mmetụta mmetụta uche ọ bụla, na ọgwụ a na-enyekwa aka n'ụdị oke ụra nke ka mma. Ndị na-esiri ike ịrahụ ụra na nke a ọgwụ a bara uru nye ha.
♦ Oria cancer
N'oge nnyocha ndị e mere na ọnụ ọgụgụ na ụmụ oke, n'oge nchọpụta ndị ahụ, anyị chọpụtara na ọgwụ epethalon acetate na-emepụta mkpụrụ ndụ ndị dị otú a nke na-enyere aka na ọnya ọrịa cancer. Mgbe ị matara nke a, e nyere ọtụtụ ụmụ anụmanụ nwere ọrịa kansa ọgwụ ọgwụ ahụ, na ihe ijuanya na ha na-agwọ ọrịa ahụ, ebe ọgwụ ahụ mere ka ọnyá cancer niile nwụọ.
Mgbe e mechara nchọpụta ndị a nke ọma, e nyere ọgwụ ndị a na-arịa ọrịa cancer ndị mmadụ, ma n'okwu ha, ọgwụ a na-arụ ọrụ nke ọma, na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ gwọrọ ya n'ụzọ zuru ezu. Ngwurugwu a na-arụ ọrụ kpọmkwem na anụ ahụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-etolite cancer na ahụ mmadụ.
♦ Retinitis pigmentos
Ọrịa a bụ ụdị ọrịa anya; na nke a, a na-ebelata mkpara ndị dị n'ihu onye ahụ. Ọgwụ a na - enyere aka na ọgwụgwọ ọrịa a. A na-agwọkwa ọrịa a na mbụ ụmụ anụmanụ; ọbụna, mgbe nnyocha mere ebe ụmụ anụmanụ nọ, ihe karịrị 90% nke ụmụ anụmanụ na-agwọ ọrịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Mgbe nke ahụ gasị, mgbe e nyere ndị ọrịa a na-agwọ ọrịa dị nso na 90% nke ndị ọrịa na ọrịa a.
♦ Mee ka antioxidant dịkwuo mma
Agwara m ya n'elu banyere iji ya na mkpa nke antioxidants. Ha na-ebelata usoro nbibi nke cell, site n'enyemaka nke anyị na-eme ka usoro ịka nká kwụsị. A chọtara seissues mgbe nchọpụta ahụ mere ụmụ anụmanụ. Mgbe ha matara na ọgwụ a na-enyere aka mee ka antioxidant dị mma, a na-enye ọgwụ ndị a na-enyeghị anụmanụ na-enweghị antioxidant, mgbe a chọpụtasịrị ya, a chọpụtara na ọgwụ a na-enyere aka melite antioxidants n'anụ ahụ nke anụ ahụ. Mgbe ọ hụrụ ihe ọma dị otú ahụ, a na-enye ọgwụ ndị a na-enye ndị ọrịa nwere ọrịa dị otú ahụ, a na-enye ọgwụ ọjọọ a, ọ nyekwaara ha aka imebi usoro ha na-emebi emebi cell.
5. Epithalon Acetate mmetụta utịp
Dị ka ị ghaghị ịmara na ihe niile nwere ezigbo ụfọdụ na ụfọdụ nsogbu. Ọ bụ otu ihe ahụ na ọgwụ epethalon acetate. Ruo ugbu a, ị maara banyere uru nke ọgwụ a, ma n'oge a, ị ga-ama banyere mmetụta dị na ọgwụ ahụ. E meela ọtụtụ ụdị nyocha, ma ruo ugbu a, anyị enwetabeghị mmetụta ọ bụla site na ọgwụ a. Nanị otu akụkụ nke anyị nwetara bụ na ka anyị na-atụle ọgwụ ọgwụ acetal nke epithalon na-enyere aka n'ịba ụba nke telomere n'ogo ọbara nke ndị 60 dị afọ 80. Mmetụta dị n'akụkụ bụ na n'ọnọdụ ụfọdụ nke a, ọgwụgwọ emewokwa mmetụta na-adịghị mma.
Akụkụ a dị n'akụkụ a, na ụfọdụ, agafewo n'ókè dị otú ahụ na ndụ mmadụ efuola na mmetụta a.
Nke a bụ nanị akụkụ dị mma anyị hụrụla ruo ugbu a mgbe eji ọgwụ a eme ihe ruo ọtụtụ afọ. Ọgwụ a bụ ọgwụ na-azọpụta ndụ, mana ihe ndị na-adịghị arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụ na anyị nwere ike ikwu na ọ bụ ihe dị ka ihe gbasara 10% ikpe, ma na 90% ikpe ọ gwọrọ nsogbu ndị ọrịa. Nke a na - eme ọgwụ dị ize ndụ na ụfọdụ, ọ dịbeghị ihe ọ bụla gosiri na ihe kpatara ya na ọgwụ a adịghị arụ ọrụ nke ọma, ọtụtụ ụdị nchọpụta banyere ikpe ikpe ahụ emeela, ma ọ dịghị ihe na-abịa n'aka anyị.
6. Epithalon aweghachite ojiji maka ederede
Ọgwụ ọ bụla nwere ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị, nke a bụ ụdị ọgwụ dị otú ahụ dị ezigbo mkpa, ma ọ bụrụ na mmadụ adịghị eji ọgwụ a eme ihe dịka usoro ahụ si dị, mgbe ahụ ọ ga-arụ ọrụ na-ezighị ezi nye ha. Ya mere, ka anyị mara banyere ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị nke ọgwụ a, biko lee ya anya nke ọma.
Usoro ọgwụgwọ a na-adabere n'ọrịa ụdị ọrịa ị na-aṅụ ọgwụ a. Enwere ụzọ dị iche iche dị iche iche na ụdị usoro ọgwụgwọ atọ dị iche iche, ma ha bụ ndị kachasị dị irè, ọkara dị irè ma dị irè. Ọ na-adabere na gị ụdị ụdị usoro ị ga-eji, ị nwere ike ịjụ dọkịta gị banyere usoro onunu ogwu. Ya mere, usoro onunu ogwu bu:
Epithalon acetate onunu ogwu (kachasị irè)
Ogologo oge - A ghaghị ịṅụ ọgwụ a mgbe oge kwesịrị ekwesị, maka ọgwụ ọjọọ ahụ, ị ​​ga-ewere ọgwụ a n'etiti 10 ruo ụbọchị 20.
Ọgwụgwọ-Nke a pụtara na ole ị ga-ewe, nke ahụ bụ 400 ka600 mg nke Epithalon kwa ụbọchị.
DailyFrequency- Mgbochi kwa ụbọchị nke ọgwụ a bụ 200 mg kwa ọrụ.
Epithalon Acetate onunu ogwu (usoro irè)
Nke a na - enyekwa ọgwụ a ga - esite na ntan ma ọ bụ tụlee, na nke a ka anyị ga - ama banyere usoro ọgwụgwọ dị otú ahụ.
Oge-ogologo oge ọgwụ dị otu nke dị n'elu, nke dị n'etiti 10 na 20 ụbọchị.
Ọgwụgwọ-Ngwá ọgwụ nke sprays na tụlee dị n'etiti 15 na 30 mg nke Epithalon acetateper ụbọchị.
Ugboro ugboro - A na-ekewa oge ugboro ugboro n'ime atọ atọ kwa ụbọchị.
Na-agwọ ọrịa Epithalon acetate (ọtụtụdị irè)
Usoro ikpeazu n'okpuru akuku onu ogugu bu usoro injectable. Na usoro a, ọgwụ ahụ na-enye ọgwụ, a makwaara usoro a dị ka usoro kachasị mma na nke kachasị dị irè. Ụdị usoro nke usoro a:
Oge-oge nke usoro a dịkwa otu ụzọ ọzọ, nke dị n'etiti 10 ruo 20 ụbọchị.
Ọgwụgwọ-Usoro usoro nke usoro a bụ 5 ka 10 mg kwa ụbọchị.
Oge ole na ole nke ọgwụ a bụ otu n'ime ụbọchị kwa ụbọchị maka ụbụrụ dị ala, ebe onye ọ bụla nwere ike iwepụta ụzọ abụọ n'ime ụbọchị kwa ụbọchị dị ka ụdị dị elu.
Usoro nke usoro ọ bụla bụ maka 10 gaa na 20 ụbọchị, mgbe ọ gwụchara nke ụbọchị 10-20, ọ ga-abụrịrị na onye ọ bụla kwesịrị inwe ọdịiche zuru ezu nke ọnwa 4to 6, mgbe nke ahụ gasịrị, ha nwere ike ịmegharị ọgwụ ahụ. Nke a bụ maka ihe ọmụmụ atọ.
7. Epithalon Ebe nchekwa nchekwa acetate
Ị ga-ahụrịrị na igbe nke ụfọdụ ọgwụ na ebe ha dere ya na mkpụrụ akwụkwọ akpọrọ iwe AKWỤKWỌ, n'okpuru igbe ahụ ha nyere ọnọdụ nchekwa nke ọgwụ ahụ. Ụfọdụ ọgwụ nwere ihe dị otú ahụ n'ime ha na a pụghị idebe ha n'ime okpomọkụ. Ya mere maka ọgwụ ndị dị otú ahụ, e nwere ọnọdụ kwesịrị ekwesị nke a ga - etinye na ha ma bụrụ ndị a ga - ewepụta naanị mgbe ọ dị mkpa ka eji ya. Nke a nwekwara Epithalon acetate nchekwa ọnọdụ, anyị ga-atụle ọnọdụ ndị a ebe a.
Nanị ọnọdụ a na-atụ aro n'ebe a bụ na a ghabebe ya na ebe dị jụụ dị ka ngwa nju oyi. A na-ekwu na ọ bụrụ na ị na-edebekwu ebe na-ekpo ọkụ, nke a nwere ike imebi ọgwụ ahụ. N'ihe ọ bụla, e nwere 98% dị ọcha peptides, nke a ga-etinye n'ọnọdụ oyi ma ọ bụrụ na a gaghị edebe ya n'okpuru ọkụ ọkụ. Nke a nwekwara ike itinye mmetụta na ịdị ọcha nke peptides.
Nke a bụ naanị ọnọdụ nchekwa na-atụ aro n'uche.
8. Webe a ịzụta ọgwụ ọgwụ acetate acetal?
E nwere nanị ụfọdụ ndị na-ere ahịa n'Ịntanet ndị na-ere ọgwụ a, n'ihi na ọgwụ a gụnyere ụfọdụ amino acids. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ọgwụ acetate, ị nwere ike ịchọta ya na ntanetị ma ọ nwere ike ịzụta eme ihe. A ga-enyefe ya n'ụlọ gị n'ime oge etiti oge.
Enwere ọtụtụ ndị na-adịghị ahụkebe n'ebe ahụ, ndị na-ere ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ na ntanetị, ị ga-enyocha ụlọ ọrụ na onye na-ere ahịa nke ọma site na ebe ị ga-azụ ọgwụ a. Ịkwesịrị ịzụta ọgwụ ọ bụla dị otú ahụ site n'aka onye ọrụ ahịa ọhụụ ọzọ, n'ihi na ọgwụ a dị oké egwu ma na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ onye ọrịa, yabụ maka ikpe ahụ, ị ​​kwesịrị ikwere na ịzụta ọgwụ sitere n'aka ndị na-ere ọgwụ na ahụmahụ naanị.
Nke a bụ maka Epithalon Acetate ọgwụ, n'isiokwu a, anyị nwere ike ịma ihe dị iche iche dị ka Epithalon acetate uru, Ihe Epithalon acetate anti-aging feature, ngwa nke Epithalon acetate ọgwụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara ọgwụ a nke bụ nchekwa ndụ maka ọtụtụ.
Anyị bịara mara na ọgwụ Epethalon acetate na-enyere aka n'ịba ụba nke telomere, nke dị na mkpụrụ ndụ ọbara, nke na-ezoro ya na ụbụrụ anyị. Ọ bụghị naanị na ọgwụgwọ a na-enye aka n'ichepụta ụbụrụ na-arịwanye elu na anya. Ọbụna ọ na-enyere aka igbu mkpụrụ ndụ cancer ahụ na mmadụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị maara banyere usoro ọgwụ a ma gaa n'ihu n'akụkụ ebe anyị kọọrọ gbasara ngwa ngwa Epithalon acetate. Anyị bịakwara mara banyere uru nke ọgwụ a, ebe anyị bịara mara banyere uru nke ọgwụ a.
N'ịga n'ebe ahụ, anyị maara banyere usoro ọgwụgwọ nke Epithalon acetate drug. Onye na - aṅụ ọgwụ a kwesịrị ilekọta usoro ọgwụgwọ a mgbe niile ma kwesiri ịṅụ ọgwụ ahụ na oge dịka edere ya. N'okwu na-esote, anyị maara banyere mmetụta dị na ọgwụ a, na mgbe nke ahụ gasịrị, anyị maara banyere ọnọdụ nchekwa nke ọgwụ a. Enwere naanị ọnọdụ nchekwa, na n'ikpeazụ, anyị maara na ebe mmadụ nwere ike ịzụta ọgwụ a na ihe ị ga-eme mgbe ị zụrụ otu.
PT-141 (Bremelanotide): Ọgwụ ọhụrụ e ji mee ihe maka ịkwa iko nke nwanyi